I-Eastern India Hill Stations Yokuvakasha Ukuvakasha | Shayela ku-91-993.702.7574 Ukubhuka.
I-Eastern India Hill Stations
Iziteshi zezintaba ziyizintandokazi zamasonto phakathi kwawo wonke amaNdiya. Isimo sezulu esishisayo ezindaweni eziningi zezwe senza iziteshi zezintaba ezisempumalanga ukuphunyuka okuphelele kwezivakashi. I-Eastern India Hill Station Vacation Tour izokunika ithuba elihle kakhulu lokuhamba lonke leli zwe futhi ujabulele isimo sezulu esihle. Akukona kuphela ukuphunyuka kwehlobo lokushisa, amahora lapha yizo zonke iziphupho zabahambi. I-Eastern India Hill Stations Vacation Tour ikuyisa epharadesi elingalindelekile lapho ungaphumula khona ngempelasonto yakho. Ukuthakazelisa ekushiseni naseqhweni eboyeni e-winters, ubuhle bezintabeni abulokothi buyeke. I-Tour India Vacation Tour Tour Yakho e-Eastern India eyenziwe kahle kakhulu izokuyisa kulezi zindawo zokuhamba ezesabekayo kulo lonke elaseNdiya. Lisho umuzi bese uhamba waya ezitebhisini ezinhle kakhulu eNdiya ukuze uchithe izinsuku zakho uhambahamba ngezintaba ezihle futhi eduze kwechibi eliqabulayo noma ubheke ezintabeni ezibukeka kahle. Ukubhuka kwezincwadi zezinjabulo ezintabeni eziphefumulayo ze-India ne-Eastern India Hill Station Vacation Tour.
I-Gangtok - I-Pelling - i-Darjeeling
Uhlelo lwe-07 Nights | Ikhodi Yokuvakasha: 121
Iziteshi ezihle zase-Eastern India zase-Eastern India, eziningi zezindawo zokuvakasha ezingakaze zibonwe ngePakethe zezokuvakasha ezikhethekile zingakwazi ukwenza lesi sihlobo sikhumbule wena kanye nomndeni wakho. Khetha ukuvakasha iziteshi zezintaba e-Eastern India futhi ujabulele lehlobo ezuzwini lemvelo. Ngeke uzisole ngesinqumo sakho sokukhetha ama-Packages e-Eastern India ne-Travel Packages.
Ngemuva kokudla kwasekuseni Ukuvakasha kwendawo Isikhungo seTibetology, i-studio yaseDordul Chholten, i-Rumtek Monastery, i-Ropeway Ride ne-Shanti umbono. Ukulala ebusuku ku-GANGTOK.
Ngemuva kokudla kwasekuseni, Ukuvakasha kuya eLake Lake & Baba Mandir ekuphakameni kwezinyawo ze-13,500. (Uma kungenzeka, i-Tsangu lake ayitholakali ngenxa yezimo zezulu ezingavumelekile, sizovakashela uNamachi, okusho ukuthi "I-Sky High". Ehlelwe phakathi kwamagquma ekuphakameni kwe-5,500 ft. Iyala umbono we-panoramic wezintaba ezithwetshiwe zeqhwa nokuhanjiswa okukhulu esigodini) futhi emuva ku-Gangtok. Ukulala ebusuku ku-GANGTOK.
Ngemuva kokudla kwasekuseni Ukuhamba Ukuya Pelling (115 kms / 4 hrs.) Dlulisela kuhhotela. Ukuzilibazisa kosuku. Ukulala ebusuku ku-PELLING.
Ngemuva kokudla kwasekuseni Ukuvakasha kwendawo Idolobha laseDarap, izimvula zaseRimbi, i-Karchen Power House, i-Sewaro Rock Garden, i-Kangchendzongha Waterfalls, i-Khechodpairi Lake, i-Pemyangtse Indastri, i-Rabdentse Ruins, i-Helipad. Ukulala ebusuku ku-PELLING.
Ngemuva kokudla kwasekuseni Ukuya eDarjeeling (ama-114 kms / 4 hrs), esendaweni yaseNorth Bengal igqatshwa yizintaba ze-Himalaya futhi zizungezwe yiJay Gardens. Lapho ufika, Dlulisela kuhhotela. Ukuphumula kosuku kuyisithakazelo. Ukulala ebusuku ku-DARJEELING.
Ukuvakasha kwaseMangeni kusasa ekuseni ukuzobona ukushona kwelanga okumangalisayo phezu kwezintaba ze-Kanchenjunga, En-road ukuvakashela iGhoom Monastery edumile neBatasia loop. Ngemuva kokuvakasha kwasekuseni i-Himalayan Mountaineering Institute, i-Zoo, iThempeli laseJapane, iJala leDwala, i-Gangamaiya Park ne-Tibetan Handicraft Centre, emgwaqweni uzoba nombono ovelele weDarjeeling Tea Gardens. Ukulala ebusuku ku-DARJEELING.
Ngemuva kokudla kwasekuseni Ukuya e-Bagdogra Airport / esiteshini sesitimela esisha se-Jalpaiguri (ama-96 kms / 3 amahora ama-hrs) ohambo oluqhubekayo. En-umzila Vakashela iPashupati Market (Nepal Border) neLiki Lake (i-Natural Lake ezungezwe yizintaba nezihlahla zikaPine). Ukuphetha kuphetha.